Ustaaz Yaassiin Nuuruu fi Ustaaz Badruu Huseen magaalaa Gondar akka hin seenne dhoorkaman - NuuralHudaa
Ustaaz Yaassiin Nuuruu fi Ustaaz Badruu Huseen magaalaa Gondar akka hin seenne dhoorkaman
Last updated Dec 24, 2019 6
Majlisni magaalaa Gondar Ustaaz Yaassiin Nuuruu fi Ustaaz Badruu Huseen ‘magaalaa dhaloota isaanii akka hin seenne’ jechuun waajjira bulchinsaafi nageenya naannichaa gaafate. ‘Yoo isaan gara magaalichaa dhufan ammoo tohatamanii akka hidhaman’ jechuun xalayaa kan barreesse tahuu gabaafame.
Dararaa Muslimoota naannichaarratti raawwatamaa jirtu Ulamaafi ummanni Muslimaa bakka jiruu ka’ee hadheeffatee balaaleeffataa jiraachuun ifa.
Haqa isaanii sarbameef diddaan Muslimoonni dhageessisaa jiran bulchinsa naannoo Amaaraa hin gammachiifne. Kanaaf hayyoota Muslimaa naannichatti dhalatan maqaa balleysuufi gara-jabeenyaan tarkaanfii irratti fudhachuuf dhama’aa jiraachuu odeeyfannoon ni addeessa.
July 6, 2022 sa;aa 7:11 am Update tahe